Fanalahidy hahatongavana ho matihanina amin'ny sary | Famoronana an-tserasera
Famoronana an-tserasera | | sary
Ny fakana fotoana manokana sy tsy azo tononina amin'ny sary dia tsy mora, tokony ho fantatrao tsara fanalahidy hahatongavana ho sary matihanina ary amin'izany fomba hamaritana ny toerana sy ny fotoana mety amin'ny tifitrao, ny fikarakarana ny antsipiriany toy ny hazavana, fifantohana, fifanoherana, famahana ary ny lafiny hafa hahatratrarana ny vokatra tsara indrindra.
1 Inona no ataon'ny mpaka sary matihanina?
2 Ahoana no ahafahanao ho lasa matihanina amin'ny sary?
3 Fanalahidy ho mpaka sary matihanina
4 Torohevitra fanampiny
Inona no ataon'ny mpaka sary matihanina?
Izy io dia momba ny olona iray izay miasa amin'ny kanto fakana sary ary miaraka aminy dia mahazo vola iray Manamora anao ny famelomana ny tenanao amin'ny lafiny ara-bola, eo am-pivoarana ny filanao amina hetsika tianao ary manatanteraka anao matihanina.
Ny tena maha samy hafa ny mpaka sary amateur dia ny maka sary fotsiny ity farany mba hamonjy fahatsiarovana fotoan-dehibe.
Ahoana no ahafahanao ho lasa matihanina amin'ny sary?
Ao amin'ny tontolon'ny sary mahafinaritra dia ilaina izany mahafehy fahaizana sy fahaizana sasany izay azo amin'ny alàlan'ny fampianarana sary an-tserasera, satria ampianarin'ireo manampahaizana efa nomanina teo aloha tamin'ity sehatra ity izy ireo, izay zarao ny hafetseny sy ny zavatra niainany hahafahanao manao ny sarinao tsirairay ho mahatalanjona fotsiny.
Izy ireo dia hitarika anao hampihatra ny fahalalana tsirairay avy, anisan'izany ny Hampianarin'izy ireo anao ny fanitsiana ilaina mba hahafahanao mamoaka sary amin'ny Internet aorian'izay hisy fiantraikany amin'ny mpijery rehetra.
Fanalahidy ho mpaka sary matihanina
Mba ho mpaka sary matihanina ny zavatra voalohany tokony hanananao dia ny fitiavana an'ity kanto ity, manabe ny tenanao ary mianatra mampivoatra fahaizana sy fahaizana ahafantarana ireo tontolo iainana misy hatsarana mety hitranga, ka rehefa sary dia mijery zava-misy sy tsy mampino izy ireo, nefa tsy very antsipirihany. Araho ireto lakile ireto dia hahita valiny mahavariana ianao:
Fantaro tsara ny fakantsarinao, tadiavo ireo lafiny miasa rehetra ao aminy ary ampiasao izy ireo hanandramana tifitra samihafa hamantarana ny mety ho vitany.
Na dia tsy tena ilaina mafy aza ny fanatanterahana azy fandalinana sary, Ireo dia hanome anao fahalalana mifandraika izay azonao ampiharina mandritra ny sary nalaina tamin'ny fakantsarinao, noho izany dia mendrika ny maka fampianarana sary an-tserasera.
Atombohy amin'ny fakantsary tsotra ary araraoty ny fahafahany feno, avy eo mahazo fitaovana maodely kokoa miaraka amin'ny tombony lehibe kokoa.
Aza hadino ny antsipiriany rehetra momba ny zavatra nosamborinao; Ataovy ao an-tsaina fa misy singa izay mitaona mivantana ny vokatra farany, toy ny famirapiratana, ny fifantohana, ny zoom, ny fifanoherana, ny mizana ary ny maro hafa.
Halalino ny zavatra noforonin'ireo mpaka sary matihanina malazaAzonao atao ny manangona kopian'ny sarin'izy ireo ary mandinika azy ireo amin'ny antsipiriany mba hahazoanao aingam-panahy mandritra ny fanomanana anao ary mamaritra ny làlana tianao harahina.
Manolotra ny asan'ny mpaka sary matihanina asa tsara. Raha tsy mandeha lavitra dia ilaina amin'ny famoronana fanentanana dokam-barotra izy ireo, ka izany no fitaovana hanokatra varavarana maro ho anao.
Fitiavana ny sary ary amin'ny maha matihanina anao dia hanana fitaovana hanohanana ara-toekarena ianao; Hanao hetsika iray koa ianao hahafahanao mampahafantatra ny tenanao amin'ny alàlan'ny fiteny hita maso izay ho mora kokoa aminao ny manana traikefa.
Alao sary an-tsaina ny tenanao ho matihanina amin'ny sary sy ny zava-drehetra azonao atao amin'ny fianarana mampivoatra ny fahaizanao mandinika, hamaritana ny fotoana mety hitifirana ny fakantsarinao.
Mba hitomboana amin'ity karazana asa ity dia mila mifehy ny fakantsarinao ianao, mampivoatra ny masonao sary, mahatsapa ny votoatin'ny tontolo manodidina anao ary mianatra mankasitraka sy manome antsipiriany ireo zavatra izay mety tsy ho zakan'ny maro.
Tsy isalasalana fa ny fitaovana fakana sary an'ny fampiharana nomerika maro dia hanampy anao hanatsara ny kalitaon'ny sary rehetra, fa ny maha-izy azy dia tsy maintsy nalainareo teo aloha, raha tsy izany dia tsy hahatratra ny antenainao izany na eo aza ny fikitika rehetra ampiharinao aminy.
Ho fanampin'izay, ny sasany amin'ireo sarinao afaka maneho fotoana tsy azo haverina izy ireo, toy ny filentehan'ny masoandro mahafinaritra na fijerin'ny tantaram-pitiavana amin'ny fampakaram-bady; ka raha manao hadisoana ianao eo am-panaovana ity karazana sary ity dia tsy ho afaka ny hamerina azy.
Ny fomba tsara indrindra hahatongavana ho mpaka sary matihanina dia mianatra sy miomana amin'ny fototra mafy orina hampitomboanao tsikelikely, amin'ity fomba ity dia hahafahanao mampihatra teknika tsotra sy tena ilaina mba hankafizanao ny sary tsara indrindra.
Tsy maninona raha mila mampiasa fotoana sy ezaka be ianao, satria ao anatin'ny fizotran'ny fitomboana, ahafahanao mianatra avy amin'ny lesoka nataonao mandra-pahatongan'ny vokatra tsy mampino ary tsapanao fa tanteraka tanteraka ianao.
Azo antoka, raha vantany vao vita ny fianaranao amin'ny maha mpaka sary matihanina anao ho avy ny orana amin'ny asa Ary ny tsara indrindra dia ho afaka hahatsapa ho reharehan'ny zava-bita ianao.
Mahafinaritra ny fakana sary, Fomba fisamborana izay voasambotra ny masonao ka ankasitrahan'ny hafa. Saingy mihoatra ny zavatra hitanao izany, satria misy fahatsapana manokana izay entinao any aminy ary omenao aina ny zavaboarinao; ankafizo ny fianaranao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Fanalahidy hahatongavana ho matihanina amin'ny sary